ပြည်ထဲရေးအလုပ်အကိုင်သတင်းအချက်အလက် [Genvers] လုပ်ငန်းခွင် ၀ င်ရန်အတွက်အလုပ်နေရာ
"အတွင်းပိုင်း" အပါအဝင်တစ်နိုင်ငံလုံး site ပေါ်တွင်အလုပ်သတင်းအချက်အလက်စာရင်း
ဒါဟာအတွင်းပိုင်း၏သော့ချက်စာလုံးအားဖြင့်ရှာဖွေ site ၏အလုပ်ရှာဖွေရေးသတင်းအချက်အလက်စာမျက်နှာဖြစ်ပါတယ်။အလုပ်ဒေတာဘေ့စမှ"အတွင်းပိုင်း"အပါအဝင်အလုပ်စာရင်းများပြသခြင်း။
အခြေအနေ setting ⇒ [အတွင်းပိုင်း]
(1-30) / 35
ဂုဏ်ပြုလွှာနှင့်ပူးပေါင်းပါဝင်ပါ။ yen ယန်း ၁၀၀၀၀၀ ♪အားလပ်ရက်ရုံးပိတ်ရက်များ♪လူမှုဖူလုံရေးတိုးမြှင့်ခြင်း①အတွင်းပိုင်းဖျက်သိမ်းခြင်းအလုပ် - နေ့စဉ်လစာ ၁၂၀၀၀ မှ ၁၉၀၀၀ ယန်း②ယာဉ်မောင်း ၂ တန်မှ ၆ တန် - နေ့စဉ်လစာ ၁၃၀၀၀ မှ ၂၀၀၀၀ ယန်း♪သက်ကြီးရွယ်အိုများ 1.2 အသက် ၂၀ နှင့် ၃၀ အတွင်းတက်ကြွစွာ! "လှုံ့ဆော်မှု / စိတ်အားထက်သန်မှု" ကျွန်ုပ်၌ရှိသူအားလုံးကိုကျွန်ုပ်ဂရုစိုက်ပါမည်။
◆အတွေ့အကြုံမရှိသူများ (အလုပ်သင်) နှင့်လှုံ့ဆော်ခံရသူများသည်၎င်းကိုဂရုစိုက်ပါမည်။ experienced အတွေ့အကြုံရှိသောလူများ (လက်မှုပညာရှင်များ) သည်တက်ကြွသောအခန်းကဏ္ play မှပါဝင်နိုင်သည့်နေရာများစွာရှိသည်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သင်ကသိချင်ရင်ကောင်းတဲ့နေ့ပဲ။ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါရန်အခမဲ့ခံစားရပါ။<< လက်သမားကိုရည်ရွယ် 》 ဤအရာသည်တစ်သက်တာအတွက်အရာများ၏ကျွမ်းကျင်မှုများကိုသင်ယူရန်သင့်အခွင့်အရေးဖြစ်သည်။သင်ကအတွေ့အကြုံမရှိသေးရင်တောင်နင့်ကိုသင်လိုက်နာမှာပါ။ ကျေးဇူးပြုပြီးမဆိုင်းမတွနဲ့ကျွမ်းကျင်မှုတွေကိုဂရုတစိုက်ရယူပါ။ပျော်ရွှင်ရွှင်မြူး။ ခင်မင်ရင်းနှီးသောမိတ်ဆွေများ♪သင်၏ "လှုံ့ဆော်မှု"၊ "စိတ်အားထက်သန်မှု" နှင့် "ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး" တို့ကိုအထူးအလေးထားပါသည်။အချိန်ကြာမြင့်စွာအလုပ်လုပ်နိုင်သူများကိုကြိုဆိုသည်။
ကုမ္ပဏီသို့ ၀ င်ရောက်ခြင်းအတွက်ဂုဏ်ပြုသောအခကြေးငွေရှိသည်
[ကုမ္ပဏီ]  အတွင်းပိုင်းဖျက်သိမ်းရေး ၀ န်ထမ်း  ယာဉ်မောင်း (1t-2t arm roll car)
内装解体スタッフ ◇日給1万2000円～1万9000円（普通免許のみ保有者） ◇日給1万3000円～2万円　（準中型/中型免許保有者） ▪1日2...
Nagumo Housing Co. , Ltd.
ငြမ်း / Tobi လက်သမား [နေ့စဉ်လစာ ၁၀၀၀၀ မှ ၂၀၀၀၀ ယန်းနှင့်အထက်! ] အကယ်၍ သင်သည်မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာလုပ်ငန်း Nagumo Housing တွင် "စူပါမင်းကြီး" ဖြစ်လိုလျှင်!
ဤကဲ့သို့သောသူကိုငါရှာနေပါတယ် ] ■ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနှင့်ဆက်သွယ်ရေးကိုတန်ဖိုးထားသူများ■ခြေရာခံရာတွင်ပေါ့ပေါ့တန်တန်လုပ်ဆောင်နိုင်သူများ - ဖောက်သည်များ၏ရှုထောင့်မှကြည့်ရှုခြင်းဖြင့်အလုပ်များလုပ်နိုင်သူများ - ကုမ္ပဏီ၏ကြီးထွားမှုနှင့်သူတို့၏တိုးတက်မှုတွင်ပါ ၀ င်နိုင်သူများ [ကျွန်ုပ်တို့သည်လည်း မိတ်ဖက်ကုမ္ပဏီများကိုရှာဖွေသည်] ကျွန်ုပ်တို့သည်ပန်းချီ၊ ငြမ်း၊ အတွင်းပိုင်း၊ ပစ္စည်းကိရိယာ၊ အမိုး၊ အမိုးစသောစက်မှုလုပ်ငန်းတစ်ခုစီတွင်မိတ်ဖက်ကုမ္ပဏီများရှာဖွေသည်။ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါရန်အခမဲ့ခံစားရပါ။
"ငြမ်း" "ပန်းချီ" "အတွင်းပိုင်း" "နံရံ" "စာရွက်သတ္တု" ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ထမ်း
နေ့စဉ်လစာ ၁၀၀၀ မှ ၂၀၀၀၀ ယန်း + အမျိုးမျိုးသောထောက်ပံ့ကြေးများ * အတွေ့အကြုံနှင့်စွမ်းရည်ပေါ် မူတည်၍ ဆုံးဖြတ်သည်
Matsudo စီးတီး, Chiba စီရင်စု
[Matsudo စတိုး] ☆ new ☆ 3-7-20 Kogane Kiyoshigaoka, Matsudo City, Chiba Prefecture TEL: 047-382-5640 [Funabashi ဌာနခွဲ] 3-8-18 Takanodai, Funabashi စီးတီး, Chiba စီရင်စု [Kashiwa ဌာနခွဲ] Kashiwa City, ချီဘာစီရင်စု ...
Nagumo Housing Co. , Ltd.အလုပ်များကြည့်ပါ
Lifelong Kogyo Co. , Ltd.
အလုပ်တွေအများကြီး!တည်ငြိမ်သောကုမ္ပဏီ!တစ် ဦး အဆင်ပြေအလုပ်ခွင်!အစပြုသူများကိုကြိုဆိုပါတယ်သင်စိတ်ဝင်စားလျှင်အဆင်ပြေပါသည်။မင်းကိုကြင်နာစွာနဲ့ယဉ်ကျေးစွာလမ်းညွှန်ပါလိမ့်မယ်။အတွေ့အကြုံရှိသူ ဦး စားပေးကုသမှု complete အဆောင်ပြီးပြည့်စုံသည်။ဝေးဝေးကလူများအတွက်အဆင်ပြေပါတယ်!
နေ့စဉ်လစာ ၁၃၀၀၀ မှ ၁၈၀၀၀ အထက်အထက်။ * အတွေ့အကြုံနှင့်စွမ်းရည်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားသည်
Yashio City, Saitama စီရင်စု
Yashio City၊ Saitama စီရင်စုရှိနေရာများ၊ တိုကျိုရှိရပ်ကွက် ၂၃ ခု၊ Chiba စီရင်စုနှင့် Kanagawa စီရင်စုများ!အလုပ်နေရာများစွာ!
Lifelong Kogyo Co. , Ltd.အလုပ်များကြည့်ပါ
Meiwa Kenso Co. , Ltd.
[ပြည်ထဲရေး၊ လက်ဝါးကပ်တိုင် / ကြမ်းပြင်] အတွေ့အကြုံရှိပြီးလက်မှုပညာရှင်များကိုကြိုဆိုပါတယ်။ငါတို့သည်သင်တို့ ဦး စားပေးကုသမှုပေးမည်!၎င်းသည်သက်သောင့်သက်သာရှိသောပတ် ၀ န်းကျင်တွင်တစ်ချိန်တည်းတွင် "တည်ငြိမ်သော" နှင့် "မြင့်မားသော ၀ င်ငွေ" ရရှိနိုင်သောကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။
# ငါတို့လက်ဝါးကပ်တိုင်လက်သမားနှင့်ကြမ်းပြင်လက်မှုပညာရှင်များကိုရှာဖွေနေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အတွေ့အကြုံ ၃ နှစ်ကျော်ရှိသည့်လက်မှုပညာရှင်များကိုရှာဖွေနေသည်။
●အတွင်းပိုင်း (ကြမ်းပြင် / ဆောက်လုပ်ရေး) ဆောက်လုပ်ရေး ၀ န်ထမ်း
# နေ့စဉ်လစာ [အတွေ့အကြုံရှိသူ] ယန်း ၁၅၀၀၀ မှ ၁၇၀၀၀ ယန်းသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုသည်။ * အတွေ့အကြုံသည် ၃ နှစ်နှင့်အထက်ဖြစ်သည်။ သင်၏အတွေ့အကြုံနှင့်စွမ်းရည်များကိုကျွန်ုပ်တို့သုံးသပ်ပြီးအကဲဖြတ်ပါမည်။ * သင်၏ကြိုးစားအားထုတ်မှုပေါ် မူတည်၍ မည်သည့်အချိန်တွင်မဆို
Meiwa Kenso Co. , Ltd.အလုပ်များကြည့်ပါ
တစ်ပတ်လျှင် XNUMX ရက်♪ [ဆောက်လုပ်ရေးစီမံခန့်ခွဲမှု] အတွင်းပိုင်းအပြီးသတ်အလုပ်မန်နေဂျာ (စီမံခန့်ခွဲမှုအလုပ်) ★အတွေ့အကြုံရှိသူ★လစာအနိမ့်ဆုံးကုသမှု★
ကျွန်ုပ်တို့၏ဆောင်ပုဒ်သည်ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်ဖြစ်သည်။ ] ယုံကြည်မှုနှင့်အောင်မြင်မှုများကိုကျွန်ုပ်တို့ရရှိခဲ့သည်။ companies ★ other အခြားကုမ္ပဏီများမှအလုပ်ပြောင်းရန်စဉ်းစားနေသောသူများ☆★ I ကျွန်ုပ်နားမလည်သောအရာများသို့မဟုတ်မသက်ဆိုင်သောအရာများရှိသည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်။အကယ်၍ သင်သည်အတွေ့အကြုံရှိသူဖြစ်ပါကသင်၏အတွေ့အကြုံကိုချက်ချင်းပြသနိုင်သည့်ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုရှိသည်။သင့်ရဲ့စွမ်းရည်ကိုအပြည့်အဝအသုံးချပါ။ငါတို့သည်သင်တို့၏ "လှုံ့ဆျောမှု" နှင့် "GUTS" စနစ်တကျအကဲဖြတ်ပါလိမ့်မယ်။
တစ်ပါတ်2ရက်
[ကုမ္ပဏီ] ■ပြည်ထဲရေးလုပ်ငန်း << ဆောက်လုပ်ရေးစီမံခန့်ခွဲမှု >> ၀ န်ထမ်းများ * ဆောက်လုပ်ရေးစီမံခန့်ခွဲမှုအင်ဂျင်နီယာများနှင့်ဒါရိုက်တာများကဲ့သို့သောအတွေ့အကြုံရှိသူများကိုထပ်ဆောင်းအခြေအနေများအတွက်တောင်းဆိုလိမ့်မည်။ လစဉ်ယန်း ၂၅၀,၀၀၀ (သို့) ထိုထက်မက။
အဓိကအားဖြင့် Saitama စီရင်စုနှင့်တိုကျိုမြို့ဆင်ခြေဖုံးများတွင်
★လက်ဝါးကပ်တိုင်အလုပ် << အတွေ့အကြုံမရှိ >> ပိုက်ဆံရှာ!နေ့စဉ်လစာ ၁၈၀၀၀ ယန်း + စွမ်းရည်လစာ★အတွေ့အကြုံမလိုအပ် - အချိန်ပိုနီးပါးမရှိသလောက်ရှိသည်။ များပြားလှသောစီမံကိန်းများနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောအလုပ်ဖြင့်တည်ငြိမ်သော ၀ င်ငွေ!အရည်အချင်း☆၎င်းသည်သင်၏လှုံ့ဆော်မှုနှင့်စိတ်အားထက်သန်မှု♪စွမ်းဆောင်ရည်သည်ကောင်းမွန်ပြီးဝန်ထမ်းများနှင့်မလုံလောက်ပါ။
[ကုမ္ပဏီ] လက်ဝါးကပ်တိုင်ဆောက်လုပ်ရေး ၀ န်ထမ်း << အတွေ့အကြုံမရှိပါ။ အတွေ့အကြုံရှိသူ (လက်မှုပညာ) ◆နေ့စဉ်လုပ်ခ ၁၈၀၀၀ ယန်း ~ + လုပ်နိုင်စွမ်းလုပ်အားခအတွေ့အကြုံ (အလုပ်သင်) ◆နေ့စဉ်လုပ်ခ ၁၀,၀၀၀ ယန်း ~ * စမ်းသပ်ကာလ ၄၅ ရက် ...
Urayasu City, Chiba စီရင်စု
အဓိကအားဖြင့်တိုကျိုနှင့်ရပ်ကွက် ၂၃ ခုတွင်ဖြစ်သည်
ပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံရန်လက်သမား၏ခေါ်ယူမှု!ကျွန်ုပ်တို့သည်လက်မှုပညာနှင့်အရောင်းသမားများအားလက်သမားအလုပ်၊ အထည်၊ ပစ္စည်းကိရိယာ၊ အမိုး၊ ပန်းချီ၊ ရေပေးဝေရေး၊
ကျွန်ုပ်တို့သည်ပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်း မှလွဲ၍ ကျယ်ပြန့်သောစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွင်ကြီးထွားလာနေသောကုမ္ပဏီငယ်တစ်ခုဖြစ်သည်။・ အတွေ့အကြုံရှိသူများ၊ ကုမ္ပဏီအားသက်ဝင်လှုပ်ရှားစေရေးတွင်အဓိကအခန်းကဏ္ play မှပါ ၀ င်ပါ။・ အတွေ့အကြုံမရှိသူများ၊ အတူတကွကြီးပွားကြပါစို့။ !!
ပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းနှင့်ပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံဆောက်လုပ်ရေး ၀ န်ထမ်းများ
★အတွေ့အကြုံရှိသူနေ့စဉ်လုပ်အားခ ၁၅၀၀၀ ယန်း ~ ★အလုပ်သင်နေ့လုပ်လုပ်ခယန်း ၁၀၀၀၀ ~ ★လစာသည်ကုမ္ပဏီနှင့်လူပုဂ္ဂိုလ်၏စွမ်းဆောင်ရည်ပေါ်တွင်မူတည်သည်။ ★အသုံးပြုမှုကာလ ၂ လ (တူညီသောအခြေအနေများ)
Chiyoda ရပ်ကွက်၊ တိုကျို
2--4-5 Kajicho, Chiyoda-ku, Tokyo Kuroeya Kajicho အဆောက်အအုံ 8F ဤနေရာသည်တိုကျို၏ရပ်ကွက် ၂၃ ခုတွင်တည်ရှိသည်။
K Max ကုမ္ပဏီလီမိတက်
[ရာသီဥတုကြောင့်မထိခိုက်သည့်အတွင်းပိုင်းဖျက်သိမ်းရေးအလုပ်] သင့်တွင်အတွေ့အကြုံ (သို့) အရည်အချင်းမရှိလျှင်ပင်တည်ငြိမ်သော ၀ င်ငွေရရှိပါ။ပိုက်ဆံတွေကိုချက်ချင်းဝင်ယူပြီးအလုပ်တွေအများကြီးလုပ်ပါ။နေ့စဉ်ငွေပေးချေမှုအိုကေ!
[အတွင်းပိုင်းဖျက်သိမ်းခြင်းနှင့်ပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းနှင့်ပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်းများနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အထောက်အကူပြုအလုပ်များကိုဖျက်သိမ်းခြင်း] ရာသီဥတုကြောင့်ထိခိုက်မှုမရှိသောကြောင့်ထိုနေရာသည်ရုတ်တရက်အချည်းနှီးဖြစ်လာခြင်းအတွက်စိုးရိမ်စရာမလိုပါ။လုပ်ငန်းခွင်၌သူတို့၏အတွေ့အကြုံများကိုအပြည့်အဝအသုံးချခြင်းအားဖြင့်အလုပ်လုပ်လိုသူများအတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်းတို့ကိုချက်ချင်းအသုံးချနိုင်သောပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုကိုဖန်တီးလိမ့်မည်။အကယ်၍ သင်သည်လုံးဝကွဲပြားသောအလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်နေသည်ဖြစ်သော်လည်းဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်၌စတင်လုပ်ကိုင်လိုပါကလက်မှုပညာရှင်၏လုပ်ဆောင်မှုဖြင့်စတင်နိုင်ပါသည်။၎င်းသည်လုံးဝကိုယ်တိုင်အစီရင်ခံသောအပြောင်းအလဲစနစ်ဖြစ်သောကြောင့်သင် "ကျွန်ုပ်သည် ၀ င်ငွေရချင်သည်" သို့မဟုတ် "ကျွန်ုပ်နည်းနည်းလိုချင်သည်" ကဲ့သို့သင်နှင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်စေနိုင်သည်။
နေ့စဉ်လစာ - ယန်း ၁၁၀၀၀ မှ ၃၈၀၀၀ ယန်း + အမျိုးမျိုးသောထောက်ပံ့ကြေးများ (သီးခြားစီသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကုန်ကျစရိတ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုစီကိုပေးလိမ့်မည်) ဆိုက်ကိုစောစီးစွာပြီးစီးလျှင်ပင်ငွေပမာဏအပြည့်အစုံပေးချေရမည် (နေ့စဉ်လစာအာမခံချက်) ability စွမ်းရည်ပေါ် မူတည်၍ ...
တိုကျို၊ Saitama၊ Chiba၊ Kanagawa စီရင်စု၏နေရာများစွာကိုတွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့သည်။ ၂-၂-၁၀ Kitaotsuka၊ Toshima-ku၊
K Max ကုမ္ပဏီလီမိတက်အလုပ်များကြည့်ပါ
T-Planning Co. , Ltd.
ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခြင်းအတွက် ၀ န်ထမ်းများအရေးပေါ်ဝန်ထမ်းခေါ်ယူခြင်း။ fee fee အခကြေးငွေတစ်ဝက်မရှိပါ။ မိနစ် ၃၀ အကြာတွင်ပင်လစာပြည့် ၀ အာမခံပါသည်။ လုပ်ငန်းခွင် ၁ ခု၊ အတု ၂ ခု၊ အတု ၃ ခု…စသည်ဖြင့် on သင်၏ကြိုးစားအားထုတ်မှုသည်သင်၏လစာတွင်ထင်ဟပ်လိမ့်မည်။ * သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကုန်ကျစရိတ်အပြည့်အဝပေးချေမှု
အသက် ၁၈ မှ ၄၀ အတွင်းရှိသူများသည်တက်ကြွစွာပါ ၀ င်ကြသည်။အလွယ်တကူလုပ်နိုင်တဲ့အရာကအခက်အခဲမရှိဘူး၊ အရှိန်အဟုန်ကိုသင်တန်ဖိုးထားနိုင်တယ်။ တစ်ဖွဲ့လျှင်လူ ၂ ယောက်မှ ၃ ယောက်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့အနေဖြင့်ဆောင်ရွက်ပါ။သင့်တွင်မေးခွန်းများရှိပါကသင့်ပတ် ၀ န်းကျင်ရှိသက်ကြီးရွယ်အိုများသည်သင့်အားချက်ချင်းကူညီလိမ့်မည်။ ★လုပ်ငန်းခွင်၌ကောင်းမွန်သောအသင်းအဖွဲ့များရှိသည်။ ထို့ကြောင့်လုပ်ငန်းခွင်တွင်းအတွေ့အကြုံမရှိသူများပင်စိတ်ငြိမ်သက်မှုနှင့်အတူအလုပ်လုပ်နိုင်သည်။ ★သင်၏နောက်ဆက်တွဲစနစ်သည်ပြီးပြည့်စုံသည်။ငါများစွာသောလူတွေ့ဆုံရန်မျှော်လင့်နေပါတယ်!ကျွန်တော်တို့မှာအတွေ့အကြုံမရှိကြတဲ့သူတွေကိုတောင်အလုပ်ကနေစပြီးသင်ယူနိုင်တဲ့ပညာရေးစနစ်ရှိတယ်။ကျွန်ုပ်တို့တွင် ၁၀ နှစ်ကျော်အတွေ့အကြုံရှိသော ၀ ါရင့် ၀ န်ထမ်းများစွာရှိသည်။ ထို့ကြောင့်အတွေ့အကြုံလုံးဝမရှိသောသူများပင်လျှင်အလုပ်ကိုသေချာစွာလေ့လာနိုင်သည်။သင်သည်လှုံ့ဆော်ခံရပြီးသန့်ရှင်းစင်ကြယ်မှုကိုခံစားနေသရွေ့အတွေ့အကြုံမရှိသူများပင်ငွေရှာနိုင်သည်။ဟုတ်ပါတယ်၊ အတွေ့အကြုံရှိတဲ့လူတွေနဲ့အချိန်ကြာမြင့်စွာအလုပ်လုပ်ချင်တဲ့သူတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ရှာဖွေနေပါတယ်။
အလုပ်ချ, အထွေထွေအလုပ်, အလုပ်ဖျက်သိမ်း
လုပ်ငန်းခွင် ၂ လုပ် ၁၆ ယန်း ~ လုပ်ငန်းခွင်အလုပ် ၁ ယန်း ၈၀၀၀ ~ * နေ့စဉ်ငွေပေးချေမှုရပြီ။နေ့၏ပထမနေရာ (၈း၀၀-၁၂း၀၀) နေ့တွင်ငွေပေးချေမှုအပြည့်အဝနမူနာ ၈၃၀၀၀ ယန်း ၂ နေရာ (၁၃း၀၀) ...
အဓိကအားဖြင့်တိုကျိုနှင့် Saitama စီရင်စု၏ဆင်ခြေဖုံးများတွင်!Ikebukuro ဘူတာမှ Ueno ဘူတာမှ ၈ မိနစ်လမ်းလျှောက်ရပြီး Kawaguchi ဘူတာမှ ၁၀ မိနစ်လမ်းလျှောက်ရသည်။
T-Planning Co. , Ltd.အလုပ်များကြည့်ပါ
ဖြိုဖျက်ခြင်းလုပ်ငန်း☆မြေကြီးလုပ်ငန်း skilled ကျွမ်းကျင်သည့်အလုပ်☆အထွေထွေအလုပ်☆လက်လုပ်သား★တစ်နေ့လုံးငွေပေးချေမှုရရှိနိုင်★ကြိုတင်ချေးငှားစကားပြောခြင်း★အတွေ့အကြုံရှိသူ - မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာမိန်းကလေးများ!ကျွန်ုပ်တို့သည်အသက်အရွယ်မရွေးလူများအားရှာဖွေနေသည်။ကွဲပြားခြားနားသောစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်အလုပ်အကိုင်ပြောင်းလဲနေတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါရန်အခမဲ့ခံစားရပါ။သူဟာဘာမှပြောစရာမလိုဘဲကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးကိုအဓိကထားပြီးအလုပ်ခန့်ထားလို့ယုံကြည်စိတ်ချရသောသမ္မတဖြစ်သည်။
ကောင်းမွန်သောစီးပွားရေးစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်တည်ငြိမ်သောအလုပ်ပမာဏ << အလုပ်တွင်အနှောင့်အယှက်မရှိ >> ကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီသည် << ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးကို ဦး စားပေး >> ပြင်းထန်သော << အတွေ့အကြုံမရှိကြပါ။လက်မှုပညာရှင်များ (အတွေ့အကြုံရှိသူများ) သည်တက်ကြွစွာပါ ၀ င်နိုင်သည့်ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုဖြစ်သည်။တစ် ဦး ကအိမ်, ကြင်နာခြင်းနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောအကြီးတန်းသင့်ကိုကျောထောက်နောက်ခံ!ငါတို့သည်သင်တို့၏လှုံ့ဆျောမှုနှင့်စိတ်အားထက်သန်မှုကိုအခိုင်အမာအကဲဖြတ်ပါလိမ့်မယ်။အလုပ်ရရန်ဒီအခွင့်အလမ်းကိုယူကြပါစို့။
◆ဖြိုဖျက်ခြင်း◆လုပ်ငန်းခွင် ၀ န်ထမ်းများ
[ကုမ္ပဏီ] [က] period လေ့ကျင့်သင်ကြားမှုကာလမရှိပါနေ့စဉ်လစာယန်း ၁၀,၀၀၀ မှ ၁၅၀၀၀ ယန်း★★လခပေးချေမှု (အရည်အချင်းများနှင့်အရည်အချင်းများကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်ပိုနှစ်သက်) * နေ့စဉ်အပြည့်အဝငွေပေးချေခြင်း၊ အပတ်စဉ်ပေးချေခြင်း၊
အဓိကအားဖြင့် Kanagawa စီရင်စုနှင့်တိုကျိုမြို့ဆင်ခြေဖုံးများတွင်
Flying Construction Co. , Ltd.
[ပန်းချီလုပ်ငန်း၊ စတာတွေ] အများကြီးရှိတယ်။အလုပ်များစွာ!လေယာဉ်တည်ဆောက်မှုတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အဓိကအားဖြင့်ပန်းချီကားများအပြင်ရေစိုခံ၊ အိမ်ခေါင်မိုးနှင့်ကြွေပြားများကဲ့သို့သောနေရာအမျိုးမျိုးကိုလုပ်ဆောင်သည်။ကြီးထွားနေဆဲဖြစ်သောကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီတွင်အတူတကွကြီးပွားကြပါစို့။
●ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသည်အများပြည်သူဆိုင်ရာအဆောက်အအုံများနှင့်တိုက်ခန်းများပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်းများနှင့်တံတားပန်းချီလုပ်ငန်းများမှအထွေထွေအိမ်များ၏အပြင်ဘက်နံရံဆေးသုတ်ခြင်းလုပ်ငန်းများ၊ အပြင်နံရံများနှင့်ခေါင်မိုးများ၊ ရေစိုခံနိုင်မှု၊ တံဆိပ်ခတ်မှုများ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်အထူးပြုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုအထူးပြုသည်။အလှအပနှင့်ရှုခင်းသာမကဘဲရေစိုခံကာကွယ်ခြင်း၊ သံချေးမကာကွယ်ခြင်း၊ထို့အပြင်လုပ်ဆောင်ရန်အလုပ်အမျိုးအစားများစွာရှိသည်၊ ထို့ကြောင့်သင်တစ်ချိန်တည်းတွင်တိုးတက်မှုကိုအမှန်တကယ်ခံစားရနိုင်သည်။
●ပန်းချီဆွဲခြင်း ၀ န်ထမ်းများ။ ။ အခြားအလုပ်များမှလူများကိုတစ်ချိန်တည်းမှာရှာဖွေနေသည်။
●နေ့စဉ်လစာ [အတွေ့အကြုံရှိသူ] ၁၅၀၀၀ မှ ၂၅၀၀၀ ယန်း [အတွေ့အကြုံမရှိသော] ၁၀,၀၀၀ ယန်းစတင် * အတွေ့အကြုံနှင့်စွမ်းရည်များကိုစဉ်းစားသုံးသပ်ပါမည်။ မင်းရဲ့ကြိုးပမ်းမှုအရမင်းကိုလစာတိုးပေးမှာပါ * ...
Narashino City, Chiba စီရင်စု
● Chiba ခရိုင်ရှိနေရာများ၊ Chiba စီရင်စုရှိ Narashino မြို့နှင့်တိုကျိုနှင့် Saitama စီရင်စုများကဲ့သို့သောဆင်ခြေဖုံးရပ်ကွက်များ။
Flying Construction Co. , Ltd.အလုပ်များကြည့်ပါ
Miso Sugita Co. , Ltd.
ကုမ္ပဏီသို့ ၀ င်ရောက်ခြင်းအတွက်ဂုဏ်ယူပါတယ်။ ပြန်လည်စတင်ရန်မလိုပါ။ ဗိသုကာဆိုင်ရာပန်းချီ ၀ န်ထမ်းများ [အတွေ့အကြုံရှိသူများကြိုဆိုပါတယ်> ★အရည်အသွေးမြင့်မားပြီးကောင်းမွန်သောစွမ်းဆောင်ရည်ဖြင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောအလုပ်၊ စီမံကိန်းများစွာနှင့်အလုပ်ပြတ်ခြင်းမရှိပါ။ ★အရည်အချင်း☆၎င်းသည်သင်၏ "လှုံ့ဆော်မှု / စိတ်အားထက်သန်မှု" ♪ အကယ်၍ သင်စိတ်ဝင်စားပါကကျွန်ုပ်နှင့်ဆက်သွယ်ပါ။
★☆ဘယ်လိုအလုပ်မျိုးလဲ။ဘယ်လိုအလုပ်ခွင်မျိုးလဲငါစိုးရိမ်တယ်! For ★☆★သင့်အတွက်♪အဘယ်ကြောင့်အတွေ့အကြုံအားဖြင့်ကုမ္ပဏီသို့မ ၀ င်ပါသနည်း★ everyone လူတိုင်းသည်စိုးရိမ်ပူပန်မှုများနှင့်မျှော်လင့်ချက်များပြည့်နှက်နေသည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်ပါသည်။အားလုံးသောအားဖြင့် ကျေးဇူးပြု၍ သင်၏မျက်လုံးနှင့်ကိုယ်ခန္ဓာနှင့်တွေ့ကြုံခံစားပါ။ဒီမှာ 's လျှင်, ကအေးမြ!မင်းလုပ်လို့ရလား !!ဒါပေမယ့်ကိစ္စမရှိပါဘူးသင်၏အရေးကြီးသောဘဝကိုထောက်ပံ့သောအလုပ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်နေခြင်းကြောင့်သတိထားပါ။ Bus ★အလုပ်များပြီးကောင်းမွန်သောစီးပွားရေးစွမ်းဆောင်ရည်★။အလုပ်အတွက်အားလပ်ချိန်မရှိပါ ★☆ဤသည်မှာတစ်သက်တာအတွက်သင်၏လက်၌အလုပ်တစ်ခုရရန်သင့်အခွင့်အရေးဖြစ်သည်။သငျသညျအတွေ့အကြုံမရှိရင်တောင် "လှုံ့ဆျောမှု" နှင့် "စိတ်အားထက်သန်" သူတွေကိုကျနော်တို့ကအစကတည်းက back up လိမ့်မယ်။ယခုမှစ။ "လက်၌အလုပ်များ" အရေးကြီးသောအချိန်ကာလပဲ!ပြီးနောက်ရှိသမျှတို့, "အလုပ်လွယ်ကူခြင်း" ကြီးမားတဲ့အချက်ပါ!၎င်းသည်အကျိုးရှိစေသည့်ကောင်းသောပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုဖြစ်သည်။၎င်းသည်ယုံကြည်စိတ်ချရပြီးသက်သေပြနိုင်သောကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်၎င်း၏ ၀ န်ထမ်းများနှင့်သာစိတ်ရင်းမှန်၊
[ကုမ္ပဏီ] အတွေ့အကြုံရှိသူ◆နေ့စဉ်လုပ်အားခ ၁၈၀၀၀ ယန်းအထိအတွေ့အကြုံမရှိ◆ [အလုပ်သင်] နေ့စဉ်လစာ ၁၀,၀၀၀ ယန်းစတင်★စမ်းသပ်ကာလ ၃ လ★★☆သင်၏လှုံ့ဆော်မှုနှင့်ကြိုးစားအားထုတ်မှုကိုကောင်းစွာအကဲဖြတ် ...
ဆင်ခြေဖုံးဒေသသည် Yokosuka City ကိုဗဟိုပြုသည်
Miso Sugita Co. , Ltd.အလုပ်များကြည့်ပါ
Shinsei Assist Co. , Ltd.
ဖျက်သိမ်းသည့်နေရာမှလွယ်ကူစွာကူညီနိုင်သည်။ အတွေ့အကြုံမရှိသောကြိုဆိုပါ၏။ တစ်ရက်လုံးငွေပေးချေခြင်းတစ်ပတ်လျှင် ၁ ရက် ~ ကောင်းပြီလှုံ့ဆော်မှုပေါ် မူတည်၍ ၀ င်ငွေမြင့်မားသည်။အစပြုသူများကိုကြိုဆိုသည်။
* လွယ်ကူသောအလုပ်လုပ်ရန်အတွေ့အကြုံမရှိသူများကိုကြိုဆိုသည်။သင်အရည်အချင်းပြည့်မှီရန်မလိုပါကျွန်ုပ်တို့သည်သင့်အားကြင်နာစွာနှင့်ယဉ်ကျေးစွာလမ်းညွှန်ပါလိမ့်မည်။ ၄ င်းတို့၏လက်ထဲတွင်အလုပ်ရလိုသူများအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ အချိန်ပိုင်းအလုပ်များကိုကြိုဆိုသည်။အချိန်ပြည့် ၀ န်ထမ်းခန့်အပ်မှုရှိပါသည်။ enthusi စိတ်အားထက်သန်သူများ၊ ဝင်ငွေရရှိရန်အခွင့်အရေးရှိသည်။
လုပ်ငန်းခွင်တွင်း ၀ န်ထမ်းများ
နေ့ဆိုင်း●နေ့စဉ်လုပ်အားခ ၁၁၅၀၀ ယန်း ～ ညဆိုင်း●နေ့စဉ်လုပ်ခ ၁၃၅၀၀ ယန်း ～ ★ကြိုတင်ထွက်ခွာသွားမှု၊ အချိန်ပို၊ ညဥ့်နက်စရိတ် salary လစာတိုးမြှင့်ခြင်း။
2134-10 Hikawa-cho, Soka-shi, Saitama Kanagawa-Yokohama-shi, Kawasaki-shi, Chiba-ken, Chiba-shi, Matsudo-shi, Saitama-ken, Saitama-shi စသည်တို့
Shinsei Assist Co. , Ltd.အလုပ်များကြည့်ပါ
Saito Kogyo Co. , Ltd.
လှုံ့ဆော်မှုပေါ်မူတည်။ မြင့်မားသောဝင်ငွေ!အချိန်မရွေးငွေပေးချေမှု!အတွေ့အကြုံရှိသူ ဦး စားပေးကုသမှု!အစပြုသူများကိုကြိုဆိုသည်။၎င်းသည်မည်သူမဆိုလုပ်နိုင်သောအလုပ်ဖြစ်သည်။နည်းပညာမရှိပါ။
မည်သူမဆိုချက်ချင်းမှတ်မိနိုင်သည်၊ ထို့ကြောင့် [၀ င်ငွေမြင့်မားခြင်း] ဖြစ်နိုင်သည်။ကျွန်ုပ်တို့သည်အလုပ်သင်ကာလပြီးဆုံးပါကသင်၏လစာကိုမြှင့်တင်ပါမည်။နေ့စဉ် / အပတ်စဉ်ငွေပေးချေမှုညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုသည် OK ဖြစ်ပါသည်။အများကြီးအလုပ်!အတွေ့အကြုံရှိသူ ဦး စားပေးကုသမှု!
နေ့စဉ်လစာ ၁၄၀၀၀ ယန်း (အတွေ့အကြုံရှိသူ) သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုသောအတွေ့အကြုံရှိသူ ဦး စားပေးကုသမှု! * အတွေ့အကြုံနှင့်စွမ်းရည်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားမည်။ * အတွေ့အကြုံမရှိကြသောသူများသည်အလုပ်သင်ကာလ ၂ လရှိကြသည်။ အလုပ်သင်ကာလနေ့စဉ်လစာ ၁၂၀၀ ...
Kawaguchi City, Saitama City, Toda City နှင့်တိုကျို၏ရပ်ကွက် 23, Nerima Ward, Itabashi Ward နှင့် Kita Ward, Saitama Prefecture * တိုက်ရိုက် / တိုက်ရိုက်အပြန်အလှန်ဖြစ်နိုင်သည်
Saito Kogyo Co. , Ltd.အလုပ်များကြည့်ပါ
Emblem Co. , Ltd.
▼မြင့်မားသောဝင်ငွေ!နေ့စဉ် 1 ယန်းကျော်! ▼နေ့စဉ်ငွေပေးချေမှုအိုကေ! →အလုပ်အဆုံးတွင်လုပ်သောအလုပ်အတွက်ငွေလုံး ၀ !! ▼အတွေ့အကြုံရှိသောအတွင်းပိုင်းဖျက်သိမ်းမှုကိုကြိုဆိုသည်။ ▼ကိုယ်ရေးရာဇဝင်မပါဘဲလွယ်ကူစွာစတင်နိုင်သည်။ ▼မှတ်ပုံတင်ပြီးနောက်တစ်နေ့တွင်အလုပ်လုပ်ပါ
အတွင်းပိုင်းဖျက်သိမ်း / အထွေထွေအလုပ်
အတွင်းပိုင်းဖျက်သိမ်းခြင်းလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိသူနေ့စဉ်လုပ်ခ ၁၃၀၀၀ ယန်း ~ လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံကိုစဉ်းစားပြီးနောက်ဆုံးဖြတ်ချက်အထွေထွေအလုပ် / အတွေ့အကြုံမရှိသူတစ်နေ့နေ့စဉ်လုပ်ခ ၁၁၀၀၀ ယန်း ~
Funabashi City, Chiba စီရင်စု
တိုကျို၊ ဆင်ဘား၊ ကန်တာဝါနှင့်ဆင်နာမြို့ဆင်ခြေဖုံးများ (တိုက်ရိုက်ပြန်လာ OK)
Emblem Co. , Ltd.အလုပ်များကြည့်ပါ
Hasegawa Shoji Co. , Ltd.
"ချိုးဖောက်" ခြင်းနှင့် "သယ်ဆောင်ခြင်း" အတွက်ဖျက်သိမ်းရေးလုပ်သားများကိုစုဆောင်းခြင်း!Multi-business development သည်ဒေသခံအသိုင်းအဝိုင်းနှင့်နီးကပ်စွာဆက်နွယ်မှုရှိသည်။ တည်ငြိမ်သောအလုပ်ပမာဏ၊ Genba တွင်အနှောက်အယှက်မဖြစ်ခြင်း!
[ဖျက်သိမ်းရန် = ပစ္စည်းများကိုဖျက်ဆီး] ၎င်းသည်အခြားအလုပ်များတွင်သင်မတွေ့ကြုံနိုင်သောအရာဖြစ်သည်။ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီတွင်တွေ့ကြုံခံစားပါ။ ◎အမျိုးသမီး ၀ န်ထမ်းများသည်တက်ကြွစွာပါ ၀ င်သည်။ →သင့်၏တက်ကြွစွာပါ ၀ င်နိုင်သည့်အလုပ်များရှိသည်၊ ဥပမာသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးယာဉ်မောင်းနှင့်လက်ဖြင့်အလုပ်လုပ်ခြင်း။ desired တစ်ပတ်နှစ်ရက်လိုချင်သောအားလပ်ရက်များတွင်ရနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ၀ န်ထမ်းများ၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကိုတန်ဖိုးထားသောကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။သင်အများကြီးဝင်ငွေရနိုင်!သင်၏မိသားစု၊ သူငယ်ချင်းများနှင့်သင်၏အချိန်ကိုတန်ဖိုးထားခြင်းဖြင့်သင်ကြိုးစားလုပ်ဆောင်နိုင်သည်။
ဖြိုဖျက်ခြင်းအလုပ်, အတွင်းပိုင်းဖြိုဖျက်, စက်မှုစွန့်ပစ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးယာဉ်မောင်း
လစဉ်လစာ ၂၅၀,၀၀၀ ~ လစာတိုးမြှင့်ခြင်း●လေ့ကျင့်သင်ကြားမှုကာလပြီးဆုံးသည် (၃ လ * လျှော့)၊ လစာတိုးမြှင့်မှုနေ့စဉ်လစာယန်း ၁၀၀၀၀ ~ ၁၈၀၀၀ ယန်းစွမ်းရည်ပေါ် မူတည်၍
Inashiki City, Ibaraki စီရင်စု
Inashiki စီးတီး, Ibaraki စီရင်စု, စီရင်စု၏တောင်ပိုင်းတစ်စိတ်တစ်ပိုင်း, စီရင်စု၏ဗဟိုအစိတ်အပိုင်းနှင့် Chiba စီရင်စု၏မြောက်ပိုင်း
Hasegawa Shoji Co. , Ltd.အလုပ်များကြည့်ပါ
[ပြည်ထဲရေး ၀ န်ထမ်းခေါ်ယူခြင်း။ ] သက်သောင့်သက်သာရှိသောအလုပ်ပတ် ၀ န်းကျင်တွင်သင်သည် "တည်ငြိမ်သော ၀ င်ငွေမြင့်မားသော" နှင့် "တစ်သက်တာအတွက်အရည်အချင်း" နှစ်ခုလုံးကိုတစ်ချိန်တည်းရနိုင်သည်။ ※●အတွေ့အကြုံနည်းပါးသူများပင်နေ့စဉ်လုပ်အားခယန်း ၁၁၀၀၀ နှင့်အထက်ရှိသည်။
● "ဘုတ်အဖွဲ့ကဘာလုပ်သလဲ။ " ငါမကြာခဏမေးခွန်းတစ်ခုကိုရပေမယ့်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပြောရလျှင်သူက "အိမ်၏နံရံများနှင့်မျက်နှာကျက်လုပ်ခြင်း" ၏အလုပ်ပါပဲ။နံရံပစ္စည်း "light iron (LGS), etc") ၏အရွယ်အစားကိုချိန်ညှိ။ လုပ်ဆောင်ပါ၊ သို့မှသာသူသည် frame နှင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်အောင် fit နှင့် fix လုပ်ပါ။ကျွန်ုပ်ကိုယ်ပိုင်လက်ဖြင့်ပြုလုပ်သောဘုတ်သည်ပြီးပြည့်စုံစွာကိုက်ညီသည်နှင့်တပြိုင်နက်ကျွန်ုပ်သည်အူကြောင်ကြောင်ဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်သည့်အတွက်အလွန် ၀ မ်းသာပါသည်။ ●အရိုးစုသာရှိတဲ့အထီးကျန်နေရာတစ်ခုကမင်းရဲ့လက်တွေနဲ့ "အခန်းတစ်ခန်း" လို့ခေါ်နိုင်တဲ့အခြေအနေတစ်ခုဖြစ်လာတယ်။ မင်းကနေ့စဉ်ရလာဒ်တွေကိုမြင်ပြီးခံစားရတာ၊ ပြီးတော့တာရှည်ဆက်လုပ်လို့ရမယ်။ # ဆိုက်မှာကျနော်တို့အကြီးတန်းဝန်ထမ်းများနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်။တစ်ခါတစ်ရံတွင်သမ္မတကိုယ်တိုင်ကိုယ်တိုင်ထိုနည်းစနစ်ကိုသင်ကြားပေးသည်။လေထုကိုကြားရ။ လွယ်ကူသောကြောင့်စိတ်ငြိမ်သက်မှုဖြင့်စတင်နိုင်ပါသည်။
●ဘုတ်အဖွဲ့လက်သမား * အတွေ့အကြုံရှိသူ ဦး စားပေးကုသမှု!သင်အများကြီးဝင်ငွေရနိုင်! * အတွေ့အကြုံမရှိသူများကိုကြိုဆိုသည်။ကြီးပြင်းသည်!
●နေ့စဉ်လစာ ・ အတွေ့အကြုံမရှိ / ၁၁၀၀၀ ယန်း (သို့) ထိုထက်မက ced အတွေ့အကြုံရှိသူ၊ ယန်း ၁၅၀၀၀ (သို့) ထိုထက်မက [လစဉ်ဝင်ငွေဥပမာ] ・ အတွေ့အကြုံမရှိခြင်း / ကုမ္ပဏီသို့ဝင်ရောက်ပြီးနောက်ဒုတိယနှစ် (၂၂ နှစ်) နေ့စဉ်လစာ ၁၀,၀၀၀ ...
●တိုကျိုရှိ site တစ်ခုစီ၊ အဓိကအားဖြင့်ရပ်ကွက် ၂၃ ခုတွင်ရှိသည်။ * ကား / မော်တော်ဆိုင်ကယ်စီးရန်အဆင်ပြေသည်
Tobi ☆ငြမ်းဆောက်လုပ်ရေး ၀ န်ထမ်း★ပြင်ပမှ / ကန်ထရိုက်တာခန့်အပ်ခြင်း★နေ့စဉ်လစာ ၁၀၀၀ မှ ၁၈၀၀၀ ယန်း☆အတွေ့အကြုံမရှိသော ၁၀,၀၀၀ ယန်းစတင်★နေ့စဉ်နှင့်အပတ်စဉ်ငွေပေးချေမှုဆွေးနွေးပွဲများ★အသက် ၂၀ ကျော်သူများသည်တက်ကြွစွာပါဝင်ကြသည်။ လူငယ်အရင်းအမြစ်များမှဝါရင့်များသို့ဝါရင့်များမှငှားရမ်းခြင်း။အလွန်ကောင်းတဲ့ဆက်သွယ်ရေး
◆အလုပ်များသောစီးပွားရေး။ကောင်းမွန်သောစီးပွားရေးစွမ်းဆောင်ရည် << တည်မြဲပြီးရေရှည်အလုပ်ပမာဏ >> အသက် ၂၀ ကျော်လူငယ် ၀ န်ထမ်းအများအပြားသည်တက်ကြွစွာရှိပြီးလူတိုင်းသည်လူငယ်များကိုအပြည့်အဝဖော်ပြသည့်သွက်လက်သည့်ဝန်းကျင်တွင်လွတ်လပ်စွာအလုပ်လုပ်ကြသည်။၀ န်ထမ်းအားလုံးသည်ရွှင်လန်းမှုနှင့်ခင်မင်ရင်းနှီးမှုရှိကြပြီး၎င်းသည်လုပ်ငန်းခွင်ဝန်းကျင်တစ်ခုဖြစ်သည်။နွေရာသီတွင် BBQ နှင့်အလုပ်ခွင်ပြီးနောက်သောက်စားပါတီများကဲ့သို့သောအိမ်တွင်းပွဲများကိုကျင်းပကြသည်။အလုပ်အပြင်ဘက်တွင်သင်ပျော်မွေ့နိုင်သောကုမ္ပဏီတစ်ခု။
◆နေ့စဉ်လစာ ၁၀၀၀၀ ယန်းမှ ၁၈၀၀၀ ယန်း♪အတွေ့အကြုံမရှိသူတစ်ယောက်၏နေ့စဉ်လစာ ၁၀,၀၀၀ ယန်းစတင် trial စမ်းသပ်ကာလတစ်ခု period အတွေ့အကြုံ၊ အရည်အချင်း၊ စွမ်းရည်ကိုခိုင်မာစွာအကဲဖြတ်လိမ့်မည်။ hard သင်၏ကြိုးစားအားထုတ်မှု ...
တိုကျို၊ ခိဘ၊ ဆာတာမာနှင့်ကန်နာဂါရှိကန်တိုဒေသတစ်ခုလုံး
[အတွင်းပိုင်းပစ္စည်းများဖြိုဖျက်ခြင်း / မီးဘေးကာကွယ်သည့်လုပ်ငန်းခွင်] အသက် ၂၀ နှင့် ၆၀ ကြားရှိ ၀ န်ထမ်းများသည်တက်ကြွစွာပါ ၀ င်ကြသည်။မင်းအဆင်ပြေရင်ကောင်းပြီ။
★လူသစ်စုဆောင်းမှုအခြေအနေ conditions လူများကြိုက်နှစ်သက်သူများ။ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီတွင်ရှိသောသင်၏အတွေ့အကြုံကကြီးမားသောတိုးတက်မှုကိုကတိပေးသည်။ ★အဓိကအထွေထွေကန်ထရိုက်တာများ၏အလုပ်အကိုင်များ၊ တည်ငြိမ်သောအလုပ်ခွင်၌ခိုင်မာသော ၀ င်ငွေရရှိပါ ★အတွေ့အကြုံမရှိသူများကိုလည်းကြိုဆိုကြသည်။ ★လူငယ်များသည်တက်ကြွစွာပါ ၀ င်ကြသည်၊ ကုမ္ပဏီအတွင်းရှိလေထုသည်ကောင်းမွန်ပြီးလူတိုင်းကောင်းသောအခြေအနေရှိသည်။
・ အတွင်းပိုင်းပစ္စည်းများဖျက်သိမ်းခြင်း ・ မီးဘေးကာကွယ်သည့်လုပ်ငန်းခွင်
◆ ၈း၀၀ မှ ၁၇း၀၀ (လုပ်ငန်းခွင် ၈ နာရီ) * ဆိုက်ပေါ် မူတည်၍ အနည်းငယ်ကွဲပြားသည်။ * ဆိုက်ပေါ် မူတည်၍ အချိန်ပိုရှိသည်။ (အချိန်ပိုကိုသီးခြားစီပေးရမည် ...
Kawasaki City, Kanagawa စီရင်စု
Tok တိုကျိုနှင့်ကန်နာဂါရှိ site တစ်ခုချင်းစီ * site သို့တိုက်ရိုက်ပြန်ပို့သည်
Artista ကုမ္ပဏီလီမိတက် 1048
★ ၀ န်ထမ်းများပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်း★အိမ်သန့်ရှင်းရေး ၀ န်ထမ်း★လုပ်ငန်းတိုးချဲ့ခြင်းကြောင့် ၀ န်ထမ်းများတိုးပွားလာခြင်း projects စီမံကိန်းများပေါများခြင်းနှင့် ၀ င်ငွေမြင့်ခြင်းသငျသညျစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်စိတ်ဝင်စားဖြစ်ကြိုဆိုကြသည်!လက်ရှိတွင်အမျိုးသမီးဝန်ထမ်းနှစ် ဦး သည်ကောင်းမွန်စွာလုပ်ဆောင်နေကြသည်။လေဝင်လေထွက်ကောင်းမွန်ပြီးပျင်းရိငြီးငွေ့သောအလုပ်ခွင်ဖြစ်သည်။
◆ပုံမှန်အားဖြင့်ပုံမှန်အားလပ်ရက်များသည်တနင်္ဂနွေနေ့များဖြစ်သော်လည်းအခြားအားလပ်ရက်များ၌ ကျေးဇူးပြု၍ ဆက်သွယ်ပါ။ cloth အထည်နှင့်ဆိုင်သောအလုပ်များနှင့်အခြားဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်နိုင်သူများအားကျွန်ုပ်တို့ကြိုဆိုပါသည်။အသေးစိတ်အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ။
သန့်ရှင်းရေး / သန့်ရှင်းရေး၊ ပြန်လည်ပြုပြင် / အတွင်းပိုင်း၊ အလင်းရောင်၊
[ကုမ္ပဏီ] လစဉ်လစာ ၂၀၀,၀၀၀ မှ ၄၅၀,၀၀၀ ယန်း★နေ့စဉ်လစာ ၈၀၀၀ ယန်း trial * ရုံးတင်စစ်ဆေးသည့်ကာလရှိပါသည်။ your ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏လှုံ့ဆော်မှုနှင့်ကြိုးစားအားထုတ်မှု (အတွေ့အကြုံနှင့်စွမ်းရည်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်း) ကိုအခိုင်အမာအကဲဖြတ်ခြင်းနှင့်ပြန်ပို့ပါမည်☆ Kei ...
Tama City, တိုကျို
[ဌာနချုပ်] 1156-1 Kaeda, Tama-shi, Tokyo Flower Mansion Koyata 2F ◆အဓိကအားဖြင့်တိုကျို / ကန်နာဂါဝါနှင့် Saitama / Chiba ဒေသများရှိ * စက်ဘီးစီး / အဆင်ပြေသည်။ 《 ...
Artista ကုမ္ပဏီလီမိတက် 1048အလုပ်များကြည့်ပါ
Eiken House Co. , Ltd.
<< အတွေ့အကြုံမရှိသူများကိုကြိုဆိုသည်။ဟုတ်ပါတယ်, အတွေ့အကြုံရှိလူလည်း! ＞＞ << လူငယ်စွမ်းအားနှင့်အမျိုးသမီးဝန်ထမ်းများသည်တက်ကြွစွာပါ ၀ င်ကြသည်။ * အများပြည်သူမှကင်းလွတ်ခွင့်လိုအပ်သည်။
အတွေ့အကြုံမရှိသေးပါကြိုဆိုပါတယ်။ကျွန်ုပ်တို့သည်“ လုံးဝအိမ်တွင်းဆောက်လုပ်ရေး” ကုမ္ပဏီဖြစ်သဖြင့်သင်သည်“ ပန်းချီဆရာများ” နှင့်“ ကျွမ်းကျင်သောလုပ်သားများ (အလုပ်အမျိုးမျိုး)” ကိုလည်းသင်ယူနိုင်သည်။
ပန်းချီဆရာ, Multi- ကျွမ်းကျင်ဝန်ထမ်း
●အတွေ့အကြုံမရှိသူတစ်ယောက်၏နေ့စဉ်လုပ်ခ ၉၀၀၀ ယန်း ~ ●အတွေ့အကြုံရှိသူနေ့စဉ်လုပ်ခ ၁၂၀၀၀ ယန်း
Sakura City, Chiba စီရင်စု
Sakura City, Chiba စီရင်စုနှင့် Kanto areaရိယာတစ်ခုလုံး
Eiken House Co. , Ltd.အလုပ်များကြည့်ပါ
[Soundproofing work] အထူးပြုကုမ္ပဏီအနည်းငယ်ထဲကတစ်ခုမှဘယ်နေရာမှာမှသင်ယူလို့မရနိုင်တဲ့သက်တမ်းတစ်လျှောက်အထူးပြုနည်းပညာကိုဝယ်ယူကြပါစို့။
●အသံဖြင့်ကာကွယ်ခြင်းအလုပ်သည်လူတို့၏နေ့စဉ်ဘ ၀ နှင့်လုပ်ငန်းခွင်ပတ် ၀ န်းကျင်ကိုကာကွယ်ရန်အရေးကြီးသောအလုပ်ဖြစ်သည်။ထို့ကြောင့်၊ ၎င်းသည်ပျောက်ကွယ်သွားမည်မဟုတ်ပါ၊ ၎င်းသည်သင်ကျေးဇူးတင်ခြင်း၏အကျိုးကျေးဇူးကိုလည်းခံစားနိုင်သည်။
●အသံလုံအောင်ပြုလုပ်သော ၀ န်ထမ်းများ
●နေ့စဉ်လုပ်အားခယန်း ၁၁၀၀၀ မှယန်း ၁၈၀၀၀ မှအထက်သို့ * အတွေ့အကြုံနှင့်စွမ်းရည်ကိုစဉ်းစားသုံးသပ်ပါမည်။ မင်းရဲ့ကြိုးပမ်းမှုနဲ့အညီငါတို့လစာကိုဘယ်အချိန်မဆိုမြှင့်မယ်။
Niiza City, Saitama စီရင်စု
● Saitama စီရင်စုတလျှောက်လုံး၊ Niiza City၊ Saitama Prefecture နှင့် Kanto ဒေသတစ်လျှောက်ရှိတိုကျို၊ Chiba နှင့် Kanagawa နေရာများ။
Toko ၀ န်ထမ်းခေါ်ယူမှုစီးပွားရေးအခြေအနေကောင်းနေပြီး ၀ န်ထမ်းအသစ်များရှာဖွေနေပါသည်။ဂုဏ်ပြုသည့်ငွေ ၁၀၀၀၀၀ ယန်းပေးရမည်။များစွာသောဆိုဒ်များရှိပါတယ်!ပန်းချီဆရာများနှင့်ရေစိုခံဆေးများကိုအရေးပေါ်ခန့်အပ်ခြင်း!ငါတို့သည်လည်းအသစ်သောဌာနများရှာကြသည်။ဒေသခံများလည်းကြိုဆိုကြသည်။အိမ်ကြီးအဆောင်ပြီးပြည့်စုံ!သင်ချက်ချင်းဝင်နိုင်သည်!
Toko ၀ န်ထမ်းခေါ်ယူမှုဌာနအသစ်တစ်ခုကိုစတင်ဖွင့်လှစ်လိုက်သောပန်းချီကားများနှင့်ရေစိုခံဆေးများကိုချက်ချင်းစုဆောင်းခဲ့သည်။ဒေသခံများလည်းကြိုဆိုကြသည်။အိမ်ကြီးအဆောင်ပြီးပြည့်စုံ!သင်ချက်ချင်းဝင်နိုင်သည်!ကုန်ကျစရိတ်ကိုပြောင်းရွှေ့ခြင်းကုမ္ပဏီဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးရှိသည် (ကုမ္ပဏီသို့ ၀ င်ရန်အတွက်ဂုဏ်ပြုသောငွေဖြင့်) ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်းထောက်ပံ့ကြေးရှိပါသည်။
တိုကျို [အတွေ့အကြုံရှိသူ] နေ့စဉ်လစာ ၁၆၀၀၀ မှ ၂၀၀၀၀ ယန်း * အတွေ့အကြုံနှင့်စွမ်းရည်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားမည်။ [အတွေ့အကြုံမရှိသူ] နေ့စဉ်လစာ ၁၂၀၀၀ ယန်း ~ * အတွေ့အကြုံနှင့်စွမ်းရည်ကိုအတွေ့အကြုံအဖြစ်သတ်မှတ်မည် ...
တိုကျိုရှိ Chiba စီရင်စု၏ရပ်ကွက် ၂၃ ခု၊ Saitama မြို့၊ Kawagoe မြို့၊ Tokorozawa မြို့၊ Saitama စီရင်စုကိုဗဟိုပြုသည်။
★အရေးပေါ်လူသစ်စုဆောင်းမှု★ဝါရင့်လက်မှုပညာရှင်များနှင့်လက်မှုပညာအမျိုးမျိုးလက်အောက်ခံဖြစ်ရန် ရည်ရွယ်၍ အတွေ့အကြုံနည်းသောလူများ!ကျေးဇူးပြု၍ လျှောက်ထားရန် feel ကျေးဇူးပြု၍ feel
★မိတ်ဖက်ကုမ္ပဏီများအားတစ်ပြိုင်တည်းစုဆောင်းခြင်း!regardlessရိယာ / ဒေသမခွဲခြားဘဲကျွန်ုပ်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ။ ★ (ကာလတိုဖြစ်နိုင်ခြေ / ရေရှည် ဦး စားပေးကုသမှု) စက်မှုလုပ်ငန်းတွင်အတွေ့အကြုံမရှိသူများကိုလည်းကြိုဆိုကြသည်။အကြီးတန်းလက်မှုပညာရှင်များသည်သင့်အားအစကတည်းကဂရုတစိုက်သင်ကြားပေးမည်။ပြည့်စုံကောင်းမွန်သောလက်မှုပညာရှင်ဖြစ်ရန်ရည်ရွယ်ပါ။အမျိုးသမီးလက်သမားတက်ကြွစွာ!ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီတွင်ယောက်ျား၊ မိန်းမမခွဲခြားဘဲအလုပ်လုပ်ရန်အတွက်ဆွဲဆောင်မှုရှိသည်။ business kin အိုကီနာဝါတွင်ရုံးခွဲသည်လုပ်ငန်းတိုးချဲ့ခြင်းကြောင့် ၀ န်ထမ်းများရှာဖွေနေသည်။
နေ့စဉ်လစာယန်း ၉၀၀၀ မှ ၂၀၀၀၀ ယန်းသို့မဟုတ်ထိုထက်မကဖြစ်နိုင်သည်။ * အတွေ့အကြုံ၊ စွမ်းရည်၊ မိသားစုတည်ဆောက်ပုံစသည်ဖြင့်ထည့်သွင်းစဉ်းစားမည်
1-29-12 Tokumaru, Itabashi-ku, Tokyo
အလုပ်တွေအများကြီးရှိပြီး ၀ န်ထမ်းတွေကိုချက်ချင်းစုဆောင်းတယ်။အစပြုသူများကိုကြိုဆိုပါတယ်လှုံ့ဆော်လျှင်မြင့်မားသောဝင်ငွေ!နွေးထွေးစွာနဲ့ယဉ်ကျေးစွာလမ်းညွှန်ပေးပါမယ်။
အိမ်ပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်းကိုအထူးပြုသည့်အထူးသဖြင့်ကရှီဝါခရိုင်၊ ခီဘာစီရင်စုရှိအထူးစီးပွားရေးဇုန်ကုမ္ပဏီသည်၎င်း၏နှစ်ပေါင်းများစွာအောင်မြင်မှုများအတွက်များစွာအကဲဖြတ်ခဲ့ပြီးအလုပ်ပမာဏမှာကြီးမား။ ၀ န်ထမ်းများမလုံလောက်ပါ။တည်ငြိမ်သောအလုပ်အကိုင်နှင့်လစာများစွာလိုချင်သူများသင်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့အလုပ်လုပ်လိုပါသလား။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်တွေကိုနှစ်သက်တဲ့အလုပ်ပဲ။
အတွေ့အကြုံရှိသူတစ် ဦး လျှင်နေ့စဉ်လုပ်အားခ ၁၅၀၀၀ ယန်း ~ အတွေ့အကြုံရှိသူနေ့စဉ်လုပ်ခ ၁၀,၀၀၀ ယန်း ~ (အတွေ့အကြုံနှင့်စွမ်းရည်ကိုစဉ်းစားမည်)
Kashiwa City, Chiba စီရင်စု
Kashiwa City၊ Chiba ခရိုင်၊ စီရင်စုရှိနေရာတစ်ခုစီ၊ တိုကျိုရှိရပ်ကွက် ၂၃၊ Ibaraki စီရင်စုစသည်။
Nuri Kimiso ကုမ္ပဏီလီမိတက်
ကျွန်ုပ်တို့သည်အကြီးစားပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းလုပ်ငန်းကို Chiba စီရင်စုတွင်အဓိကလုပ်ဆောင်သည်။ဒီနှစ်မှာတော့ရောင်းအားကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ထက်သုံးဆတိုးလာလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်၊ ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အနာဂတ်မှာပိုပြီးတိုးတက်လာမယ့်ကုမ္ပဏီတစ်ခုပါ။စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကကျယ်ပြန့်လာပြီ၊ ဒါကြောင့်အခုငါတို့နဲ့ပူးပေါင်းဖို့သင့်အခွင့်အရေးပဲ။ !!
နေ့စဉ်လစာ ၁၀,၀၀၀ ယန်းမှ ၁၇၀၀၀ ယန်း (သင်တန်းကာလနှင့်) ယာဉ်မောင်းခွင့်ပြုချက် (စီရင်စုများဖြတ်ကျော်စဉ်) တစ်နေ့လျှင်ယန်း ၁၀၀၀ မိသားစုထောက်ပံ့ကြေးတစ်ရက်လျှင်ယန်း ၁၀၀၀ အလုပ်အကိုင်ထောက်ပံ့ကြေးယန်း ၁၀၀၀၀ ဆိုက်ပြီးနောက်၊
Yachimata City, Chiba စီရင်စု
[ရုံး] ၄၂၆-၃၃ Asahi၊ Yachimata City, Chiba Prefecture အားလုံးနှင့် Chiba စီရင်စုနှင့်တိုကျိုတို့
Nuri Kimiso ကုမ္ပဏီလီမိတက်အလုပ်များကြည့်ပါ